ukuba awuzicimi iios kunye neeapps ze-android ngoku, inokukuhlawulela imali yakho oyisebenzele nzima
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukuba awuzicimi iiapps ze-iOS kunye ne-Android ngoku, inokukuhlawulela enye yemali oyisebenzele nzima
Ukuba awuzicimi iiapps ze-iOS kunye ne-Android ngoku, inokukuhlawulela enye yemali oyisebenzele nzima
Ngokuka-Ars Technica , Ingcebiso enikwe abaphandi ngumntwana ikhokelele ekufumaneni i-adware kunye nezinye ii -apps ezenzelwe ukukrazula uluntu. Eziapps zidweliswe kuzo zombini iifayile ze- apile Ivenkile yeeVenkile zeeyunithi ze-iPhone kunye neVenkile kaGoogle yokuDlala yezixhobo ze-Android. Ezi zihloko zifakelwe ngaphezulu kwezigidi ezi-2.4 amaxesha kwaye zazenza ngathi zinikezela ngeempawu ezinjengemifanekiso yamaphephadonga, umxholo wokuzonwabisa kunye nemijelo, kunye nokukhuphela umculo. Ezinye zeziapps zisebenze ngentengiso nokuba bezingavulekanga. Ezi zibizwa ngokuba zii-HiddenAds trojans ezizenza ngathi ziluncedo, kwaye zinjalo. Ziluncedo kubadlali ababi abaqokelela ingeniso yokuhambisa iintengiso kumaxhoba.
Kuthathe umntwana ukufumana i-malware efakwe ngaphezulu kwezigidi ezi-2.4 amaxesha
Kutheni ungabakhupheli nje ngaphandle abahluphi ubabuzayo? Impendulo ilula. Iimpawu zifihliwe ukuze abasebenzisi bangabinakho ukufumana indlela yokuzihlula. Ngaphandle kokuhambisa i-adware, ezinye zeziapps zibiza i- $ 2 ukuya kwi-10 yeedola ngokuthenga okungafunekiyo ngaphakathi nohlelo okuye kwavelisa i-500,000 yeedola kwingeniso ukuza kuthi ga ngoku ngokokuqikelelwa kwe-Sensor Tower firm.
Le nto ibizwa ngokuba simahla simahla, efumaneka kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, ihlawulisa imali eyi- $ 10 ngeveki yokubhalisa
Ezinye zezi spam / ii-scam zokusebenza zonyuselwe ngabasebenzisi abathathu beTikTok, omnye wabo wayenabalandeli abangama-300,000. Inkqubo yevidiyo emfutshane, umxholo wedrama enkulu phakathi kolawulo lukaTrump kunye nenkampani yabazali i-ByteDance, edlale indima ebalulekileyo ekufumanekeni kweziapps. Intombazana yenzekile ukuba ifumane iprofayili kwiTikTok eyayikhuthaza enye yeenkqubo 'zokuhlukumeza' kwaye yanika ingxelo kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye neprojekithi yoKhuseleko kwi-Intanethi ekufanele ukuba incede abantwana bommandla bahlala bekhuselekile ngelixa bekwi-Intanethi. Ngelixa ucinga ukuba isigqebelo, incam yakhokelela abaphandi kwinkampani yezokhuseleko i-Avast ukuba bazenzele eyabo kwaye yafumana ii -apps ezili-11 ezisebenzisa i-iOS kunye ne-Android ezazibandakanyeka kobu buqhetseba.
Umhlalutyi wesoyikiso ka-Avast uJakub Vávra , sathi kwingxelo, 'Siyabulela intombazana encinci ebixele iprofayile yeTikTok kuthi, ukwazi kwayo kunye nokuthatha amanyathelo anoxanduva luhlobo lokuzibophelela ekufuneka sonke sikubonise ukwenza i-cyberworld indawo ekhuselekileyo. Ii -apps esizifumeneyo zikhonyovu kwaye zaphula zombini iiGoogle & apos; s kunye neApple & apos; s imigaqo-nkqubo ngokwenza into ekhohlisayo malunga nokusebenza kweapps, okanye ukukhonza iintengiso ngaphandle kweapp kunye nokufihla i-icon yoqobo yohlelo lokusebenza kwakamsinya emva kokuba usetyenziso lufakiwe. Ingakumbi kukuba iiapps ziyakhuthazwa kumaqonga eendaba ezentlalo athandwayo phakathi kwabantwana abancinci, abanokuthi bangaziboni ezinye zeeflegi ezibomvu ezijikeleze ii -apps kwaye ngenxa yoko banokuwela kuzo. U-Avast ukwafumanise iprofayile ye-Instagram enabalandeli abangaphezu kwama-5 000 abakhuthaza eziapps.
Ezinye zeapps, njengoko besesitshilo, zaxutywa kwiTikTok nakwi-Instagram kwaye zaquka amakhonkco akhokelela kuluhlu lwawo kwiVenkile yeApple okanye kwiVenkile yeGoogle Play. Kwaye oko kusibuyisela kwinto esiyibiza ngokuba yinkqubo yethu yokulumkisa kwangoko enokukunceda ukuba ungafaki i-malware. Jonga ngokulula uphononongo kwaye ukuba ubona amagqabantshintshi amaninzi aphantsi abiza i-app, i-malware, okanye enye into embi kakhulu, yishiye yodwa. Iiapps esibhala ngazo kweli nqaku zinamanqaku aphakathi kwe-1.3 - 3.0.
I-Avast & apos; s Vávra ixhalabile malunga nolutsha olufumana ukukhushulwa kweziapps. `` Ingakumbi kukuba iiapps ziyakhuthazwa kumaqonga eendaba ezentlalo athandwa kakhulu ngabantwana abancinci, abanokuthi bangaziboni ezinye zeeflegi ezibomvu ezijikeleze ii -apps kwaye ngenxa yoko banokuwela kuzo, utshilo. U-Avast uthi wazisile u-Apple kunye uphando malunga ne-malware efumaneka kwiivenkile zabo zokugcina zeefowuni. Inkampani yophando ikwazise i-TikTok kunye ne-Instagram malunga neeakhawunti ezikhuthaza eziapps.
Kuphephe okanye ukukhipha eziapps zilandelayo:
Google Play Ivenkile:
UmxholoZone -Shawky App yasimahla-Yothusa abahlobo bam
Cofa iRoulette ++ Yothuse uMhlobo wam
Isikhupheli somculo esiPhila-uKhuphelo simahla soMculo
Yothusa abahlobo bam - iSatuna
Yothusa umhlobo wam thepha roulette v
indlela yokuqhekeza umncedisi wewebhu
Uqala njani uvavanyo lokuzenzekelayo ukusuka ekuqaleni
Uthotho lwe-Apple 6 yoHlolo
Ungamisa njani ukutsiba kwiphepha elinobunzima kunye nokuhlaziya kwiGoogle Chrome (kuboniswe isifundo se-Android)
Ukulibazisa iVerizon nge-Samsung Gear S3 Frontier smartwatch kude kube sekupheleni kukaJuni
IAmazon & apos; intengiso yokuqala enkulu yeThebhulethi yoMlilo ka-2021 ilapha
Ingxelo yakutshanje ithi i-2020 5G iimodeli ze-Apple iPhone ziya kuveliswa ukuqala kwinyanga ezayo
Ungajonga njani ukuba ngaba ifayile okanye isikhombisi sikhona kwiJava
Ukuma kwePixel kaGoogle yishaja engenazingcingo kodwa ebizayo yePixel 3 kunye ne3 XL
I-Bash ye-Loop kunye ne-Loop Examples